आजको तस्वीर : यसरी बढ्दै छ ग्रामिण मोटरबाटाहरुमा दुर्घटनाको जोखिम ! – ebaglung.com
२०७४ चैत्र १०, शनिबार ०६:१४	Top News, अन्य समाचार
बिमल खड्का बुर्तिवाङ २०७४ चैत १० । बागलुङ जिल्लाका ग्रामिण सडकहरुको दुर्दशा भनिसक्नु छैन । जसरी हुन्छ गाउँगाउँ घरआगन सम्म मोटर गुडाउने स्थानीयको चाहना र होडबाजीले अनेपेक्षित घटनाहरु पनि बढ्दै गएका छन् । खासगरी सुदूर पश्चिम निसी भूजी तमान क्षेत्र दुर्घटनाबाट बढी प्रभावित रहेको छ ।
मोटरबाटो निर्माण गर्दा भूवनावटको गम्भीर अध्ययन हुनु जरुरी छ । केहिदिन पहिले बडीगाडको दर्लिङ हुँदै भिङगिठे मोटरबाटो खन्दै गर्दा माथिबाट खसेको पहिरेले डोजर समेत पुरी डोजर चालक दुईजना युवाहरुको घटनस्थलमै ज्यान गएको थियो भने त्यस्तै केहि दिन पहिले दर्लिङको गंगरेमा जीप दुर्घटना हुँदा जीपका मालिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो बोवाङ देखी बुर्तिवाङ आउँदै गरेका दुईटा ट्याक्टर केहि मिटरको अन्तरमा भुजीखोलामा खसेर दुर्घटना भएको थियो । यी त केहि हालसालैका दु:खद दुर्घटनाहरु हुन् ।
भनाईको तात्पर्य ग्रामिण सडकहरुमा दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक बढेको छ । कच्चि मोटर बाटो त्यसैमा खाल्डा खुल्डीमा चलिरहेका सवारी साधनहरु सिटमा खचाखच यात्रु हालेर अझै नपुगेर छतमा हाल्दा सवारी सधानहरु त्यस्मा सवार यात्रुहरू कति सुरक्षित होलान ?
प्रस्तुत तस्वीरहरु ढोरपाटन नगरपालिका वडा-३ हुन्द्रफेदी, साविक खुंगा गाविस वडा ८ नजिकैको हो । हेर्दा सामान्य होला तर यसरी यात्रुहरू हालेर हिडिरहेका गाडीका मालिकले त धन कमाउलान तर ज्यान भने जोखिमा पारेर यात्रा गरिरहेका छन यात्रुहरु ।
ट्राफिक प्रहरी बजारमा मात्र केन्दित नभएर अन्य जोखिमपूर्ण ठाउमा पनि छड्के जाँच गरि दुर्घटना न्युनिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बुर्तिबाङबाट हुन्द्रफेदी, खुंखानी, बोङ्गादोभान र तमान विभिन्न सवारी साधनहरु चलिरहेका छन । यसरी चलिरहेका जिप, बसले तस्वीरमा देखिए जस्तै क्षमता भन्दा बढी यात्रु कोचाकोच गरे हाल्दा, त्यसले पनि नपुगेर सवारी साधनका छतमा यात्रु राख्दा निश्चितरुपमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ । अनेपेक्षित दुर्घटनाहरुको रोकथाममा सरोकारवालाहरु र सरकारी निकाय किन मौन ?